Wed, May 27, 2020 at 3:07am
काठमाडौं। नेपाल बैंक लिमिटेडले गत चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले छुट दिने भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणका कारण सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्दै आइरहेको र सो कारणले आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि हुन नसक्दा उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य ऋणीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी ब्याज छुट नपाउने भनी वर्गीकरण गरेका कर्जाका क्षेत्रबाहेक अन्य सबै..
काठमाडौं, ७ जेठ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उठाउनु पर्ने आन्तरिक ऋण मध्ये करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाएको छ । राष्ट्र बैंकले एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताएका हुन् । भट्टका अनुसार यसका अतिरिक्त केहिदिन भित्रै थप ४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठ्दैछ । ४ अर्ब रुपैयाँ नागरिक बचत पत्रबाट उठाउन..
काठमाडाैं, ४ जेठ। एनआईसी एशिया बैंकले आफ्ना ऋणीहरूलाई दिँदै आएको ब्याजदरमा २ प्रतिशत ब्याज सहुलियत दिने भएको छ । यसअघि बैंकले आफ्ना ग्राहकसमक्ष ऋणीहरूले वैशाखसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण किस्ता र ब्याज रकम वैशाख मसान्तभित्र चुक्ता गरेमा सम्पूर्ण ब्याज रकममा थप १० प्रतिशत छुट तथा जरिमाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुटको योजना ल्याएको थियो । बैंकले वैशाखको यो योजनालाई जेठमा पनि..
काठमाडाैं, ३० वैशाख। कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न जारी बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै विकास आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा केही व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिइए पनि पोखराका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसीएमसी)ले सोमबार पोखरामा गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र तथा सहकारीहरुबाट पूर्वसावधानी तथा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरेको नपाइएकाले पुनः..
काठमाडौं, २० वैशाख ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि अर्काे राहत प्याकेज ल्याउने बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा बोल्दै अर्काे राहत प्याकेज ल्याउने बताएका हुन् । अधिकारीले कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र निकै प्रभावित भएकाले त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर अर्काे राहत प्याकेज ल्याउने बताए । ‘अहिलेसम्म दुई राउण्डको जे जति प्याकेज..
काठमाडाैं, १६ वैशाख। सनराइज बैंकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि बन्दाबन्दीको अवस्थामा आफ्ना ग्राहकलाई डिजिटल बैंकिङ् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै घरबाटै मुद्दती खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । निक्षेपकर्ता ग्राहकले आफ्नो बचत खातामा रहेको रकमलाई मुद्दती निक्षेपमा स्थानान्तरण गरी थप ब्याज आम्दानी गर्ने चाहाना भए ‘सनराइज स्मार्ट’बाट अनलाइन मुद्दती खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त मुद्दती..
चितवन, १५ वैशाख । चितवनको नारायणगढस्थित प्रभु बैंकमा आगलागी भएको छ । विद्युत चुहावट हुँदा आगलागी भएको वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढका प्रहरी निरीक्षक रवीनबाबु रेग्मी बताएका हुन् । उनका अनुसार स्थानीयवासी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र दमकलको सक्रियतामा आगो नियन्त्रणमा लिइएको छ । बिहान ११ः २० बजे लागेको आगो ११ः ४५ बजे नियन्त्रणमा लिइएको हो । क्षतिको विवरण आउन बाँकी..
काठमाडौं, ८ वैशाख। हाल विश्वभर काेराेना भाइरस (Covid-19) महामारीकाे रूपमा फैलिएकाेले सरकारले काेराेना संक्रमण राेकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि लकडाउन गरेकाे छ । तसर्थ अत्यावश्यक सेवा भित्र परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना सेवाहरू सुचारू राखेका छन् । यस विपतको घडिमा आफ्ना ग्राहकहरूमा पर्न सक्ने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न बैंकहरूले सातवटै प्रदेशमा आफ्ना केही शाखाहरू भने खुल्ला राखेका छन् । विभिन्न बैंकहरूले आज..
काठमाडाैं, ५ वैशाख । कोरोना संक्रमणले निम्त्याउन सक्ने आर्थिक जोखिमलाई लक्षित गर्दै बीमा लेख जारी हुने भएको छ। नियामक बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा लेख जारी गर्न निर्देशन दिएको छ। हाल बीमा लेखका लागि ड्राफ्ट तयार भइरहेको र केही दिनमै पूर्णता पाउने समितिका सूचना अधिकारी तथा कार्यकारी निर्देशक निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए। केही दिनमै बीमा कम्पनीहरुले आवश्यक नीति बनाउने छन्। सो..
काठमाडौं, २७ चैत। बैंकहरूले सबै किसिमका निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको केही दिनपछि वाणिज्य बैंकहरूले पनि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले नै घटाउने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले त्यस्तै नीतिगत सुधार गर्दा ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका बैंकहरू अहिले भने मिलिजुली ब्याज घटाउन तयार भएका हुन्। डेढ वर्षअघि एक वर्षे मुद्दति निक्षेपको..
काठमाडौं, २६ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत ३० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । २७ गते ३० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले साेमबार बोलकबोलमार्फत विकास ऋणपत्र २०८१ ‘घ’ बिक्री गर्न लागेको हो। ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेश गर्न सकिने..
काठमाडौं, २४ चैत । : नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने निर्णय गरेको हो । अधिकारी यसअघि केन्द्रीय बैंककै डेपुटी गभर्नर रहेका थिए । डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारले उनलाई लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । बोर्ड सीइओ भएकै अवस्थामा उनलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको हो ।..
काठमाडौं, ११ चैत । मंगलबार बिहान ६ बजेबाट लागु हुने गरी अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूतिसहित सरकारले १ हप्ता लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सरकारको अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा बैंकिंङ सेवालाई समावेश गरिएको भने छैन । नेपाल राजपत्रमा पछिल्लोपटक प्रकाशित सूचनामा अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा परे पनि पछिल्लो निर्णयमा यो अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा नपरेपछि भोलि बैंक खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने अन्यौलता सिर्जना भएको..
काठमाडौं, ७ चैत । विश्वभर फैलाइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अबदेखि जुनसुकै बैंक वित्तीय संस्थाको एटीएम बुथबाट पैसा झिक्दा पनि शुल्क नलाग्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि एउटा बैंकबाट लिएको एटीएम प्रयोग गरेर अर्को बैंक वित्तीय संस्थाको एटीएम बुथबाट पैसा झिक्दा शुल्क लाग्थ्यो । बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी..
काठमाडौं, ५ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी चिन्तामणि शिवाकोटीले पाएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि शिवाकोटीलाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका हुन् । २०७१ साल चैत ५ गते गभर्नरको नियुक्ति पाएका चिरञ्जीबि नेपालको कार्यकाल मंगलबार सकिएपछि शिवाकोटीलाई सो जिम्मेवारी दिइएको हो । यसअघि गभर्नरको कार्यकाल नसिकँदै नयाँ नियुक्ति हुने गथ्र्यो । यस पटक राष्ट्र..
काठमाडौं, २३ फागुन । अब सुन बैंकमा निक्षेप राखेर पनि ब्याज पाइने भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थालाई बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अबदेखि सुनलाई पनि निक्षेपको रुपमा राख्न पाइने भएको हो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै सुनलाई समेत निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि यो बाटो खुलेको हो । परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ९९५..
काठमाडौं, २० फागुन । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर निर्माण तथा खरिद गर्नेका लागि खुकुलो नीति लिएको छ । सोमबार चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आवासीय कर्जा भुक्तानी अनुपात बढाएको हो । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर किन्न कर्जा लिन चाहने ग्राकहलाई आफ्नो कुल आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५० प्रतिशतमात्र यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था थियो..
काठमाडौं, ५ फागुन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०१९ मा नेपालमा आफ्नोे सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा ऐतिहासिक खर्च भएको जनाएको छ। यो वर्ष नेपालमा ३२ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको उसले जनाएको छ। नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सासेक ऊर्जा प्रणाली विकास आयोजना, खाद्य सुरक्षा र कृषिको व्यावसायिकरण, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना तथा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा उल्लेखनीय खर्च भएको एडिबीले जनाएको छ। अर्थसचिव..
काठमाडौं, ३ फागुन । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको नाम जोडिएको प्रति बैंकले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । सो बैंकले ललिता निवासको कुनै पनि जग्गा सिटिजन्स बैंकमा धितो राखेर ऋण नदिएकाे विज्ञप्ती मार्फत स्पष्ट पारेको हाे । केहि सञ्चार माध्यमद्वारा सम्प्रेषित समाचारमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै बैंकले सो कुराको खण्डन गर्दै सो कुराको भ्रममा नपर्न पनि सबैमा अनुरोध गरेको छ..
काठमाडौं, २ फागुन । पछिल्लाे समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिकांशको खराब कर्जा बढेको देखिन्छ । केही बैंकहरुले खराब कर्जा घटाए पनि अधिकांशको बढेका कारण औसतमा खराब कर्जा प्रतिशत बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनामा २८ वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जाको अवस्था औसतमा १.५४ प्रतिशत थियो ।..
काठमाडाैं, २९ माघ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत नाफा वृद्धि ७.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २५ प्रतिशतले नाफा बढेकोमा यस आर्थिक वर्षको मध्यावधिमा जम्मा ७. ९ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो। बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार २७ बैंकले छ महिनामा कुल ३३ अर्ब २० करोड खुद नाफा कमाएका छन्। जवकि गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो नाफा ३० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ..
काठमाडौं, २२ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशककाे अवकाश भएपछि विस्रुत थापा र रामबहादुर मानन्धर कामु कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका छन्। केही समयअघि रेवतीप्रसाद नेपाल र रामु पौडेले कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए। पौडेल अहिले पनि कामु कार्यकारी निर्देशक छन् भने नेपाल पूर्ण कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भइसकेका छन्। अबको केही समयमै थापा र मानन्धर पूर्ण कार्यकारी निर्देशक हुने छन्। थापालाई मुद्रा ब्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी दिइएको..
काठमाडाैं २० माघ राष्ट्र बैंकले कर्जा श्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) नपुर्‍याएको भन्दै सिभिल बैंक र सेन्चुरी कमर्सिलय बैंकलाई कारवाही गरेको छ । यि दुई बैंकले तोकिए अनुसार सीसीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार सिभिल बैंकलाई ३७ लाख ५७ हजार ४ सय ४५ रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने सेन्चुरी बैंकलाई ७..
काठमाडौँ, १४ माघ बैंकिङ कसुरका फरार व्यक्तिलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी आज कारागार चलान गरिएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशले जरिवाना र कैद सजाय तोकिए पनि फरार हुँदै आएका काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपालिका–१ का राजेन्द्र बुढाथोकी आज कारागार चलान भएका हुन् । उच्च अदालत पाटनको गत असोज २८ गतेको फैसलाले उनलाई १५ दिन कैद र रु पाँच लाख जरिवाना हुने फैसला सुनाएको..
काठमाडौँ, १ माघ पाटनको प्रसिद्ध भीमसेन मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले आज रु ५० हजार सहयोग गरेको छ । मन्दिर पुनःनिर्माण सरोकार समितिका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनलाई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले सो रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । सो बैंकका अध्यक्ष पुथ्वीबहादुर पाण्डेले केही समय पहिले नै उक्त रकमको घोषणा गर्नुभएको थियो । आज प्रतिबद्धताअनुसार रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।..
काठमाडाैं, १ माघ । आजदेखि अरूको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिको पनि ३ पुस्ते विवरण चाहिने भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स 'एफएटिएफ'को नियमअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गोएएमएल सफ्टवेर राख्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आज माघ १ गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरूले अरूको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिको..
काठमाडौँ, २९ पुस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँको न्यूरोडस्थित कृषि विकास बैंकको कर्मचारी दीपिका रेग्मीसहित आठजनाविरुद्ध सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सो बैंकको नयाँ सडक शाखाकी ट्रेलर सहायक रेग्मीविरुद्ध रु चार करोड २४ लाख १३ हजार ६११ बराबरको हानि–नोक्सानी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले बैंकका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुङ्गेलविरुद्ध..
काठमाडौं, २९ पुस । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम ‘तरलता’ सहज भएको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५० अर्बको हाराहारीमा लगानी गर्न सक्ने तरलता छ । पछिल्लो समय यो रकममा ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा..
काठमाडाैं, २७ पुस । वाणिज्य बैंकका 'सिइओ'हरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन दबाब दिएको छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदाँ उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर अध्ययन गरिरहेका बेला बैंकर्स संघले यस्तो दबाब दिएको हो। गत साउन २९ गते अर्थ समितिले दुई महिना भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त उपसमितिलाई..
काठमाडौं, २५ पुस । बैंकहरूबीच निक्षेप संकलनमा प्रतिस्प्रधा बढ्दै गएकाे छ ।बैंकहरुले आकर्षक योजना सहित निक्षेप संकलनमा नयाँ योजना सार्वजनिक गर्न थालेका हुन् । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम 'तरलता' को अभाव भएपछि यस्तो योजना ल्याउन उनीहरु बाध्य भएका हुन् । मेगा बैंकले साढे ६ प्रतिशत बचत ब्याजदरमा १७ वटा सुविधा र १० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा योजना ल्याएको छ । बैंकले ल्याएको योजनामा मोबाइल बैंकिड र..
Results 515: You are at page 1 of 18